‘भाईटीकामा आठ लाख माला चाहिन्छ’ - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारआइतबार, कार्तिक २, २०७१
‘भाईटीकामा आठ लाख माला चाहिन्छ’
नेपालको फूल संस्कृतिमा के कस्ता परिवर्तन आएको छ ?
पुजाआजामा सीमित फूलको प्रयोगमा अहिले व्यापकता आएको छ । स्वागत, विदाई, बधाई ज्ञापन आदिमा फूल प्रयोग हुनथालेको छ । बाथरुम, डाईनिङ टेबलमा फूल राख्ने चलन शुरु भएको छ । स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका लागि बगैंचामा फूल लगाउनेहरू पनि बढेका छन् ।
फूल व्यावसायको अवस्था कस्तो छ ?
माग बढेपछि व्यावसाय राम्रो हुने नै भयो । पछिल्लो १०–१२ वर्षमा पुष्प व्यावसायीहरू पैदलबाट साईकल, साईकलबाट मोटरसाईकल र मोटरसाईकलबाट गाडीमा उक्लिएका छन् । फ्लोरी कल्चर एसोसियसनमै ६४० कम्पनी सदस्य छन् । तर, विद्युत, पूर्वाधार, लगानीको अभाव यसक्षेत्रका चुनौति हुन ।
पुष्प मेलाहरुले पूmल संस्कृतिमा कस्तो प्रभाव पार्छन् ?
प्रदर्शनीको मुल उद्धेश्य फूल प्रयोगकर्ताको रुचि जान्नु हो । यस्ता मेलाले फूलप्रति आकर्षण बढाउने तथा प्रयोगकर्ताको जिज्ञासा समाधान गर्ने गर्दछन् ।
तिहारमा कति फूल आयात हुन्छ ?
गतवर्ष भाईटिकाको दिन साढे पाँच लाख माला खपत भएको थियो । यसपटक काठमाडौंका लागि आठ लाख जति माला चाहिन्छ । त्यसमध्ये दुई लाख आयात गर्नुपर्छ ।
फुलमा अझै किन आत्मनिर्भर हुन नसकिएको हो ?
उत्पादनसँगै माग पनि बढ्दै गएको छ । तर, भाईटीकामा एकै दिन धेरै माला चाहिने भएकाले पु¥याउन नसकिएको हो । फूल नफूल्ने बेलामा विवाहको लगन पर्ने भएकाले पनि माग र आपूर्तिको तालमेल मिलाउन गाह्रो भएको छ । आत्मनिर्भरताका लागि उच्च प्रविधिमा जानु आवश्यक छ तर, त्यसका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।